Global Voices teny Malagasy » Gabriela Garcia Calderon: Fito taona ary mbola mitohy ny fanisana… · Global Voices teny Malagasy » Print
Gabriela Garcia Calderon: Fito taona ary mbola mitohy ny fanisana…
Voadika ny 17 Jolay 2019 7:42 GMT 1	 · Mpanoratra Gabriela Garcia Calderon Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Mediam-bahoaka, Blaogim-Piarahamonina GV, Fahatsiarovana, fandikàna-voalohany, Fankalazana, firavoravoana
Pikantsary tamin'ny dikanteniko voalohany tato amin'ny Global Voices amin'ny teny Espaniola.
Fito taona lasa izay, namaky ilay gazety aho ny asabotsy maraina. Toy ny fihetsika mahazatra, miverimberina saika isaky ny asabotsy maraina, niavaka ny tamin'ity andro ity satria nitondra zavatra hafa. Nahita vaovao momba ny tetikasa antsoina hoe Lingua aho. Noentin'ny lohateny mivantana tany amin'ny lahatsoratra aho, ary nahita mikasika ny Lingua sy ny iraka ataony.
Tsy liana mihoatra noho izany aho.
Ary avy eo nahita baoritra kely teo amin'ny zoron'ny pejy aho: “Raha te ho anisan'ny Lingua ianao, dia mandefasa mailaka aminay azafady.”
Folo minitra taty aoriana, dia nalefako ny mailako Tamin'io tolakandro io ihany dia nahazo valiny avy amin'i Juan Arellano aho, nampahafantatra ny tenany fa tonian-dahatsoratra Lingua Espaniola ary nametraka fanontaniana telo tsotra tamiko:
– Manana fifandraisana aterineto ve ianao?
– Manana fotoana ve ianao?
– Zatra bilaogy ve ianao?
Ny valinteny ho an'ireo fanontaniana roa voalohany dia “eny”, ny fahatelo kosa “tsia”. Ka namoronany kaonty tamin'ny anarako aho ary nangataka ahy handika lahatsoratra fohy rehefa avy nanome torolalana vitsy ho ahy momba ny fomba hanatanterahana ireo asa rehetra vaovao ireo izy. Tena nahafinaritra ny nahita ny dikan-teny navoaka  ny ampitso.
Avy eo dia tonga ny hevitra hanombohana bilaogy. Ny fanontaniana mipetaka ho mandrakizay: inona no hosoratako? Inona ny lohahevitra fantatro bebe kokoa? Izaho, ny tenako, izay manodidina ahy. Ka teraka teo ny bilaogiko, mitondra anarana manokana, Seis de enero , 6 Janoary, izay efa fantatry ny olona sasany, datin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako. Singa hafa izay nahatonga ny taona 2007 ho fahatsiaro izany.
Nandeha hatrany hatrany ny fandikan-teny nanomboka tamin'izany andro izany. Nekena avokoa ny zava-drehetra, ny firenena tsirairay, ny lohahevitra rehetra. Tsy afaka ny tsy hahatsiaro ireo andro fahazaza aho, fony aho namaky ireo lisitra tsy misy fiafarany an'ny zokiko lahy izay misy ny anaran'ireo firenena vahiny tiany soratana sy soratana hatrany. Tahaka ny mbola mamaky ireo anarana ireo miaraka aminy indray aho, raha nampianatra ahy momba ny demonyme (anarana zom-pirenena), ireo renivohitra sy ny tanàn-dehibe izy. Ahoana no tsy ahafahako mankafy ny Global Voices, rehefa namelona ahy indray ireo fotoana sarobidy izy?
Roa taona taty aoriana, nanasa ahy hanoratra momba an'i Però ny tonian-dahatsoratry ny Amerika Latina Eddie Avila. Noho izany, ity ny lahatsoratro voalohany , miaraka amin'ny fandikan-teny .
Fito taona izay no lasa, tantara maro no azo zaraina momba izany fotoana izany. Olona maro, anarana vaovao maro, namana maro, anjoria maro. Fotoana mampientanentana marobe, saingy avy amin'ny fihaonamben'ny Global Voices voalohany tao Santiago de Chile tamin'ny Mey 2010 ny fientanentanana lehibe indrindra. Ary nitondra ahy tany Afrika, nivantana tany Nairobi, Kenya roa taona taorian'izay.
Tsy afaka ny ho feno fankasitrahana fotsiny aho noho izay rehetra azoko hatramin'ny andro nanombohako ho isan'ny Global Voices. Fanapahan-kevitra tena nanova ny fiainako izany. Araka ny fomba filazan'ny fahitalavitra, tsy nieritreritra momba izany aho raha nanapa-kevitra ny handefa ny mailaka voalohany. Na ny fampahatsiahivana an'i Rick Blaine, tsy nieritreritra mihitsy aho hoe ho fiandohan'ny finamanana mafinaritra izany.
Fito taona … ary mitohy ny fanisana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/07/17/141520/
 dikan-teny navoaka: https://es.globalvoicesonline.org/2007/11/12/japon-%C2%BFsoy-un-blogger/
 ny lahatsoratro voalohany: https://globalvoicesonline.org/2009/11/15/peru-blind-lawyer-strives-to-be-judge/